ESP32-CAM: Maxaad ka ogaan laheyd cutubkan | Qalabka bilaashka ah
ESP32-CAM: Maxaad ka ogaan laheyd qaybtaan
Waxaan horeyba u daabacnay waxa ku saabsan Qalabka WiFi waayo, Arduino waqti kale, laakiin markan waxay ku saabsan tahay moduleka ESP32-CAM, moduleka ESP32 WiFi oo leh kamarad yar oo fiidiyow ah. Tani waxay u oggolaaneysaa howlo cusub, sida kormeerka ama basaasidda fog, qabashada wax kasta oo dhaca marka aad maqnaato oo aad u dirto qalab kasta oo wax lagu qoro ama aad ku arki karto goobta.
Ku dhowaad wax kasta oo loo sheegay moduleka WiFi ee aan horey uga wada hadalnay, wuxuu ansax ku noqon doonaa midkan, kaliya inuu leeyahay waxyaabo yaryar oo u gaar ah marka lagu daro kamarad isku dhafan. Laakiin wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato waxaan ku tusi doonnaa tusahan ...
1 Waa maxay ESP32-CAM?
1.1 Mid soo iibso
1.2 Astaamaha farsamada ee ESP32-CAM (xaashiyaha xogta)
2 Isdhexgalka Arduino IDE
Waa maxay ESP32-CAM?
El ESP32-CAM Waa qayb aad ku adeegsan karto mashaariic fara badan, iyo Arduino. Waa qayb dhammaystiran oo leh microcontroller isku dhafan, taas oo ka dhigi karta inay si madax bannaan u shaqeyso. Marka lagu daro WiFi + isku xirnaanta Bluetooth, qaybtani waxay sidoo kale leedahay kamarad muuqaal ah oo isku dhafan, iyo booska microSD ee keydinta.
Qaybtani ma ahan mid qaali ah, waana heli kartaa codsiyada badan. Laga soo bilaabo IoT fudud, illaa kuwa kale ee aadka u horumarsan ee kormeerka muuqaalka iyo aqoonsiga iyadoo la adeegsanayo AI, iyo xitaa nidaam ilaalin si loo hubiyo waxa ka dhacaya meel fog meel kasta oo aad joogto
Mid soo iibso
Qaybta 'ESP32-CAM module' ma ahan mid qaali ah gabi ahaanba, sidaan ku iri, dhowr euro waad heli kartaa mid. Oo waxaad si fudud uga heli kartaa dukaamada khaaska ah qaarkood ama Amazon. Tusaale ahaan, waa kuwan qaar talooyinka qiimaha wanaagsan:
Laba unug oo ESP32-CAM ah si loo rakibo qalab ilaalin badan.
ESP32-CAM leh anteeno 8 dBi laba-band iyo fiilo loogu talagalay kala duwanaanta ballaaran.
Haddii aad horey u haysatay qayb ESP32 ah oo aad rabto oo keliya kamaradda, waad awoodi kartaa si gooni ah u iibso.
Iyo haddii aad doorbideyso inay dhammaystiran tahay inaad la shaqeyso USB: ESP32-CAM + module FTDI.
Sida aad u aragto, ma ahan wax qaali ah ...
Astaamaha farsamada ee ESP32-CAM (xaashiyaha xogta)
Module-ka ESP32-CAM wuxuu leeyahay xoogaa astaamaha farsamada aad u xiiso badan oo aad ka arki karto gudaha xogta macluumaadka soo saaraha. Halkan waxaan ku soo koobayaa kuwa ugu muhiimsan:
Xuduudaha kala duwan: WiFi 802.11b / g / n + Bluetooth 4.2 oo leh BLE. Waxay taageertaa soo dejinta sawirka iyada oo loo marayo WiFi.
Xiriirinta: UART, SPI, I2Ciyo PWM. Waxay leedahay 9 biinanka GPIO.
Soocelinta saacadda: ilaa 160Mhz.
Awood xisaabinta Microcontroller: ilaa 600 DMIPS.
Memoria: 520KB oo ah SRAM + 4MB oo kaararka PSRAM + SD ah
Ku daray: waxay leedahay habab badan oo hurdo ah, firmware oo ay cusbooneysiin karto OTA, iyo LED-yada loo adeegsado xusuusta flash-ka ee lagu dhex-dhisay.
Muuqaal: Waxay taageertaa kamaradaha OV2640 ee ku imaan kara xirmada ama si madax bannaan loo soo iibsan karo. Noocyada kamaradaha ayaa leh:
2 MP dareenkaaga
1622 × 1200 px UXGA xajmiga xajmiga
Qaabka wax soosaarka YUV422, YUV420, RGB565, RGB555 iyo 8-bit riixo xogta.
Waxaad ku wareejin kartaa sawirka u dhexeeya 15 iyo 60 FPS.
El pinout ee ESP32-CAM waa mid aad u fudud, sida aad ku arki karto jaantuskii hore. Kaamiraduna waxay kuxirantahay isku xiraha karti u leh. Kadib, tusaalaha Arduino, waxaad sifiican u fahmi doontaa sida ay isugu xiran tahay iyo midkasta waxa loogu tala galay, in kastoo aad horayba fikrad u heli karto.
By the way, in kasta oo aanu ka muuqan sawirka, haddana waxay sidoo kale caadi ahaan leeyihiin isku xiraha wareega ee PCB oo loo isticmaalo isku xidhka fiilooyinka anteenada dibada xaaladaha qaarkood. Badanaa waxay kudhowdahay birta xaashida godka SD.
Waad isticmaali kartaa a Adaabta FTDI inaad isku xirto modulekaan oo ay kuu sahlanaato inaad maamusho. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaalka dekedda nooca miniUSB halkii laga isticmaali lahaa fiilooyinka ESP32-CAM. Si aad u isticmaasho mid ka mid ah modulladan, waad ku xidhi kartaa sidan:
U qaabee moduleka FTDI inuu ka shaqeeyo 3.3v.
Bootada GPIO pin 0 iyo GND ee moduleka ESP32-CAM.
Qalabka 3v3 ee moduleka waa inuu ku xirnaadaa Vcc ee FTDI.
GPIO 3 (UOR) ee moduleka wuxuu aadayaa TX-da FTDI.
GPIO 1 (U0T) ee moduleka wuxuu aadayaa RX ee FTDI.
Iyo GND-da kale ee ESP32-CAM oo leh GND-ka moduleka FTDI.
Hadda mid baad leedahay Nooca USB-ga, kaas oo fududeyn kara isku xirka mashruucaaga ...
Isdhexgalka Arduino IDE
Si aad u awooddo la dhexgal FTDI, isku xirnaanta waa mid aad u fudud. Kaliya waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ku xir xiriir 5v ee moduleka ESP32-CAM Vcc ee moduleka FTDI.
Ku xir GND moduleka ESP32-CAM iyo GND ee moduleka FTDI.
TX0 laga bilaabo guddiga FTDI wuxuu aadayaa GPIO 3 (U0RXD).
RXI oo ka socda guddiga FTDI wuxuu aadayaa GPIO 1 (U0TXD).
Oo wuxuu dhaafayaa GPI0 iyo GND ee guddiga ESP32-CAM.
Hadda waxaad ku xidhi kartaa kombiyuutarka adoo adeegsanaya fiilo USB ah iyada oo loo marayo moduleka FTDI. Ikhtiyaar kale ayaa ah ku xir arduino si toos ah, iyada oo aan la isticmaalayo moduleka FTDI ah. Laakiin aan aragno kiiska FTDI oo kan ugu fiican kiisaska badankood ...
ka tallaabooyinka la raacayo si aad uhesho una jadwaliso wax kasta oo aad ku shaqeyn karto:
Si aad ugu buuxiso lambarka guddiga, waa inaad ku xir USB kombuyutarkaaga.
Tallaabada xigta waa in la rakibo Maktabada ESP32 si aad uga faa'iideysato kan. Taas awgeed, laga bilaabo Arduino IDE u gudub Faylka> Xulashooyinka> Halkaas, berrinka si loogu daro URL, ku dar: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json oo guji OK. Hada tag aaladda> Gudiga> Maamulaha Gudiga> raadi ESP32 oo taabo riix "ESP32 ee Espressif Systems".
Kadib fur Arduino bixisaa > Qalabka> Guddiyada> xulo AI-Fikirka ESP32-CAM (waa inaad haysataa addon ESP32 ah oo lagu rakibay ikhtiyaarkan si uu uga muuqdo liiska). Kadib u tag Qalabka> Dekedda oo xulo COM, halkaasoo guddigaagu ku xiran yahay.
Hada waad awoodaa soo dejiso sawir sabuuradda, si ay u fududaato, isticmaal mid ka mid ah tusaalooyinka eeg Faylka> Tusaale> ESP32> Kaamirada> CameraWebServer. Markaad dhameysato, markii fariinta lagu rakibey si guul leh u muuqato, fiilada ka saar GPIO pin 0 ee GND kadibna riix badhanka Dib udajinta ee sabuuradda.
Ugu dambeyntii, waad isticmaali kartaa oo aad bilaabi kartaa eeg natiijooyinka shabakadda dhexdeeda ... Markaad maamusho, waxay ku siin doontaa kormeeraha URL leh IP kaas oo ay tahay inaad ku geliso biraawsarkaaga shabakadda si aad u hesho. Halkaas ayaad ka hagaajin kartaa xuduudaha oo waxaad ka arki kartaa waxa laga arko dareeraha kaamerada.
Sida iska cad, waad awoodaa wax badan ka sii iyagoo ka faa’iideysanaya awoodaha WiFi iyo Bluetooth ee modulekaan. Xusuusnow in xadku yahay fikirkaaga. Halkan waxaan si fudud kuugu tusinayaa hordhac fudud ...
Macluumaad dheeraad ah - Koorsada Arduino bilaash ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » ESP32-CAM: Maxaad ka ogaan laheyd qaybtaan
Wax walba si fiican ayaa loo sharraxay, barnaamijkuna si fiican ayuu u buuxaa, laakiin markaan dib u dajiyo ESP32 si aan u ogaado Wi-Fi-ga kormeeraha taxanaha ah, had iyo jeer waxaan helaa khalad kamarad isku mid ah:
E (873) kamarad: Baadhista kamaradu waxay ku fashilantay khalad 0x105 (ESP_ERR_NOT_FOUND)
Init kamaradu waxay ku fashilantay cilad 0x105
Waxay u badan tahay inay sabab u tahay isku xirka moduleka kamarada ama sahay koronto oo aan habboonayn.
Isku day inaad xaqiijiso labadaas shay.
BeagleV: SBC cusub oo la awoodi karo oo horumarineed kuna saleysan RISC-V
Electroscope: sida loo sameeyo mid guriga lagu sameeyo iyo codsiyo